Shabaab oo Duullaan ku Dhawaaqay
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay 75 kalena way dhaawacmeen, markii ay Shabaab ku dhawaaqeen duullaan ka dhan ah DKMG Iyo AMISOM.
Dagaaladan oo u dhaxeeyay ciidamada DKMG oo kaashanaya kuwa AMISOM iyo xoogaga ka soo hor jeeda ayaa waxa ay badankoodu ka dhaceen dagmooyinka Hodan Howl Wadaag Iyo Boondheere.
Dagaalada ayaa waxaa bar bar socday madaafiic iyo duqaymo culus oo ay isku adeegsanayeen labada dhinac kuwaasoo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac aad u faro badan.
Cali Muuse Sheekh oo ah madaxa gaadiidka gurmadka ee magaalada Muqdisho ayaa VOAda u sheegay in ay dhimashadu ka badantahay 20 qof, halka ay tirada dhaawacu ugu yaraan ay marayso 75 . qof.
Dagaalada shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa iclaamiyay ururka al Shabaab oo ku dhawaaqay in la qaado weerarro ka dhan ah DKMG iyo ciidamada AMISOM.
Shir jaraa'id oo uu magaalada Muqdisho ku qabtay af hayeenka ururka al shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage ayuu ugu baaqay ciidamadooda in ay weeraraan fariisimada ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM .
Dhinaca kale sheekh C/Raxiin Ciise Caddow oo horay u ahaa af hayeenkii Midowga Maxakiimta Islaamiga, imikana ah sarkaal ka tirsan DKMG oo ka hadlay dagaalada ay iclaamiyeen ururka al Shabaab ayaa sheegay in la soo gaaray dhamaadkii dhaq dhaqaaqa howlaha al Shabaab ay ka wadaan magaalada Muqdisho.
Dagaalada iyo duqaymaha shalay galinkii danbe ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ahaa kuwii ugu cuslaa ee magaalada ka dhaca intii lagu guda jiray bisha barakaysan ee Ramadaan, waxayna dagaaladaasi khasaarihii ugu ba'naa ay ka soo gaareen dadka rayidka ah ee magaalada Muqdisho ku dhaqan.
Wararka kale ee ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ururka al Shabaab ay la wareegeen idaacada Qur'aanka Kariimka iyo dhamaanba qalabkii idaacadaasi.
War qoraal ah oo ay soo gaarsiiyeen ururka al Shabaab maamulka idaacadaasi ayay ku sheegeen in wixii maanta ka danbeeya ay iyagu kafaalo qaadayaan idaacada Qur'aanka Kariimka iyagoo sheegay in ay si toos ah ula wareegeen.